Ny fomba tsara indrindra hitantanana kaonty Twitter marobe | Martech Zone
Ny fomba tsara indrindra hitantanana kaonty Twitter marobe
Alakamisy, Aprily 7, 2016 Alakamisy, Aprily 7, 2016 Douglas Karr
Azafady mba lazao amiko fa mbola mifaly amin'ny Twitter ianao… tiako ny sehatra ary mety ho izany foana. Izany dia nilaza fa, efa niady nandritra ny volana maro aho tamin'ny alàlan'ny rindranasa birao Twitter mahazatra ho an'ny Mac. Hiadana ny fandehanan'ny rafi-pikarohako, ary ho lasa tsy mamaly ny Twitter. Mieritreritra fotsiny aho fa ny mpamorona sy ny QA olona manandrana ny fampiharana dia tsy manana mpanaraka sy fanavaozam-baovao marobe mandritra ny andro toa ahy.
I dia mampiasaHootsuite saingy tsy dia tsara loatra izany. Somary clunky ilay interface an'ny mpampiasa, ary tsy mino aho fa napetraka eo anelanelan'ny bitsika ny elanelam-potoana, ka toa manjavozavo daholo izany. Ary tiako ny misokatra fampiharana fa tsy mpitety tranonkala satria matetika no tsy nikatonako ilay mpitety tranonkala.
Taorian'ny taona maro tsy nampiasako azy dia nanapa-kevitra ny hisintona aho TweetDeck ary andramo indray. Manerana ny famoahana anay, ny bokiko, ny hetsika ho avy ary ny sehatray mailaka dia mitantana kaonty valo aho. Eny, nofy ratsy izany… mandraka ankehitriny!
Anisan'izany ny TweetDeck:
Araho maso ny isan'ny fizotrany amin'ny interface mora iray.
Manorata bitsika apetraka amin'ny ho avy.
Alefaso ny fanairana mba haharaka ireo vaovao vao misondrotra.
Sivana ny fikarohana arakaraka ny mason-tsivana toy ny fifamofoana, ny mpampiasa ary ny karazana atiny.
Manamboara sy manondrana fe-potoana manokana hametrahana ny tranokalanao.
Mampiasà hitsin-dàlana fitendry mahomby ho an'ny fitetezana mahomby.
Mampiato ny sain'ny mpampiasa na ny teny hanafoanana ny tabataba tsy ilaina.
Aza tonga amin'ny tsindry intsony: mivantana ny fotoana fizotran'ny TweetDeck.
Misafidiana lohahevitra maivana na maizina.
Ny TweetDeck dia misy ny fitantanana ekipa aza!
Angamba ny tsy ampoizina lehibe indrindra raha ny momba ny TweetDeck dia izany fitantanana ekipa dia miorina mivantana ao anaty fampiharana! Afaka mora foana aho mizara kaonty eo amin'ny mpikambana ao amin'ny ekipa tsy mila mandoa isam-bolana isaky ny mpampiasa na, ratsy kokoa, ho an'ny sehatra fitantanana sosialy Enterprise. Manokatra ny ekipan'ny ekipa fotsiny aho ary manampy ny kaonty Twitter ary raha hoka ao anaty kaonty fotsiny izy ireo na hizara ny tompony!
Raha ny marina rehetra dia mino aho fa tokony hiala amin'ny rindranasa OSX desktop -ny ny Twitter ary hanolotra TweetDeck ho solony. Niasa tsy nisy kilema. Tsy matoky aho fa hitranga izany, hatramin'ny volana lasa teo dia nanambara ny Twitter fa manidy ny kinova Windows, mitaky ireo mpampiasa Windows hiditra amin'ny lozisialy fa tsy.
TweetDeck dia mbola azo atao a App Chrome ary Fampiharana Mac amin'izao fotoana izao. Hita fa nisotro ronono ny programa Windows satria tsy mora izany tantano ny fahazoan-dàlan'ny Twitter mahomby.
Azafady mba andramo ny TweetDeck raha eo amin'ny Mac ianao ary asehoy ny fitiavana amin'ny fampiharana ny App App! Nataoko!
Tags: mitantana kaonty twitter marobeTweetDeckTwitterfitantanana twitterfitantanana ny ekipa twitter
eHarmony manangana tranokala fanaovana asa ho an'ny asa… Srsly
Ratsy ny serivisy ho an'ny mpanjifa manimba ny ROI Marketing anao
Apr 7, 2016 amin'ny 9: 25 AM
Manaiky aho! Amiko, ny Twitter no sehatra sosialy tsy misy mpampiasa indrindra. Vao haingana aho no nanomboka nampiasa TweetDeck indray, ary tena hitako fa mahasadaikatra azy io. Misaotra ny fizarana!